TAAJJABBII-Kutaa 510ffaa:Sababaan Oromiyaa keessaa Nagaandhabameef maali?:Dhaamsa obbo Lammaa Magarsaaf!
November 12, 2018 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,TAAJJABBII
Haasawaa obbo Lammaa OBN irratti dhiyoo kana haasawan caqaseen na aja’ibe, haasaa kana keessatti akka wal qajeelchinuu fi wal-gorsinu dhaamatanii ture. Dhaamsuma isaanii irratti hundaa’uun akeeka haasawaa kanaa hubachuuf tattaafadhe. Haasawaan kun kan WBO/ABO fi uummata Oromoo komatuu fi doorsisu ta’ee mul’ate. Komiini fi doorsisi kunis:
WBO qondaalota mootummaa(OPDO/ODP) ajjeesaa jira, otuma balleessineellee ajjeefamuu hin qabnu, ajjeesuun furmaata miti, nu hin tokkoomsu;
Uummati Oromoo ammoo qabsaawota isaa simachuu fi sirbuun badii dha, Oromoon gurmuu siyaasaa hedduu qabaachuun fi qabsaawaa hunda goota koo jedhee faarsuun sirrii miti;
Uummati gurmuulee siyaasaa simachuu irra darbee gorsuu qaba, maal nuuf hojjechuu dhuftan? jedhee gaafachuu malee sirbuu fi simachuun dhaabbachuu qaba;
Sababaa ormi daangaa irratti nu loluuf, Oromoon yoo hidhatee nu lola jedhee sodaatee nu waraanuuf qophaahaa jirra; hidhachuun keenyi fira kan nuuf ba’isu osoo hin taane kan diina nutti guddisu dha, diina of-irratti baa’isaa jirra;
Naannoon biraa nagaa qaba, daldalachaa jira, qotachaa jira, Oromiyaa ammoo lola keessa jirti, wal-waraanuun nu hin gargaaru, sirna-dhablummaan mootummaa hin miidhu, sirna-dhablummaan uummata miidha; karaa nuti qabannetu Oromoof baasa;
Otoo nuti wal dhabnuu kan ilkaan qaratee nu nyaachuuf nu eegutu jira, nuti ammoo dhiqatnee nyaatamuuf qophaa’aa jirra kan jedhuu fi kkf dha.
Yeroo komii fi doorsisa kana uummatatti himan hojii isaanii qabatamaan hojjechaa jiran hin beekan moo, beekaa uummata afaanfajjessuufi bifa kanaan haasa’u? Hojiin isaanii qabatamaan Oromiyaa tasgabbii dhorke keessaa wal-yaadachiisuuf:
Namoota yakkamoo nagaa Oromoo booressuu danda’an caasaa mootummaa bakka adda addaatti muudaa ijraachuu isaanii;
Dabballoota OPDO/ODP ‘face book’ irratti bobbaasuun akka olola oofan dirqama itti kennuu isaanii;
WBO haa hiikkatu jechuun, lola uummata Oromoo irratti labsuu isaanii fi loltuun EPRDF gara lixa Oromiyaatti bobbaasanii lubbuun uummata nagaa balleessaa jiraachuu isaanii;
Halagaa kan EPRDF keessa jiran gammachiisuuf jecha dantaa Oromoo miidhaa jiraachuu isaanii fi kkf dha.
WBO qondaalota OPDO/ODP ajjeese kan jettan, WBO irratti kan lola labsee, loltuu EPRDF bobbaase Lammaa Magarsaa, qoondaaloti keessan yoo loltuu EPRDF waliin ta’anii uummata nagaa irratti balaa dhaqabsiisan tarkaanfii of-irraa ittisa WBO fudhachuun karaa ta’uu mala. Ajjeesuun furmaata miti jechaa loltuu bobbaasanii uummata nagaa ajjeesisuutti kan jiru Lammaa Magarsaa, qondaalota mootummaa (OPDO/ODP) sababaanis Lammaa Magarsaa lola labseen du’aa jiru. Yeroo Lammaan waraana bobbaasee nama nagaa ajjeesan sirrii ta’ee yeroo WBO haleellaa of irraa ittisa fuddhatu ammoo dogoggora ta’aa? Yeroo waraanni EPRDF uummata nagaa ajjeesu nu tokkoomsee, yeroo WBO uummata ittisu ammoo tokkummaa keenyaaf balaa qabaataa? OPDO/ODPn uummata ajjeesisuuf haayyama obbo Lammaa qabatee, Oromoon ammoo lola irratti aggamame of-irraa ittisuuf haayyama Lammaa gaafachuu qabaa?
Oromoon jaarmayaa siyaasaa fedhe fi nama fedhe yoo simate mirga isaati. Sirbuu fi dhiichisuun yoo gammades waan nama aarsuu fi gaddisiisu hin qabu. Oromoon leenca jedhee yoo wal faarses nama dallansiisuu hin qabu. Oromoon hundi leencaa fi goota yoo ta’e gammachuu dha. Ammoo warreen halagaa waliin ta’anii Oromoo miidhaa turan leencaa fi goota ta’uu hin danda’an. Oromoon gaafa jaarmayaalee siyaasaas ta’u namoota isaaf qabsaawaa turan yeroo simatu waa waliin hin mari’atne, waa wal hin qajeelchine, waas wal hin gaafatne jechuu miti. Sababaa wal dhaggeeffatee fi wal marihateef wal simachaa jira!
Yaadi sababaa Oromoon hidhateef jecha ormi sodaatee nu lola jedhu dogoggora dha. Yoo Oromoon hidhatnoo malee ta’ee moo, yoo hidhatnoo qabaate ormi Oromoo loluuf fedha godhata? Kun seenaa keenya nu yaadachiisa. Oromoon jaarraa dhuma 19ffaa keessatti sababaa hidhatnoo baranee dhabeef jecha kolonii sirna habashaa jalatti kufe, ormi itti duulee Oromoo cabse. Hidhatnoon saba tokkoof kabajaa dha. Uummati ajjeefamee boohaa jiraatu yoomuu kabajamuu hin danda’u, yoo Oromoon hidhate ormi hidhatnoo isaa ilaalee kabajaa kenna malee loluuf fedha hin godhatu. Oromoon hidhatnoo isaatiin nagaa, mirgaa fi kabajaa isaa ittiin tiksuuf malee ‘suusii’ lola barbaade hidhachaa hin jiru, yoo hidhatnoo hin qabaatne garuu akka amma Gumuz isa gochaa jirtu, saba bicuun qee isaa irraa buqqaafama, wabii jireenyaas dhaba. Maqaa fira horatna jenne, hidhatnoo dhabnee gabroomuu irra, hidhatnoo qabaatnee diinan qabaatnee bilisoomuutu Oromoof irra wayyaa dha. Hidhachuun faashinii yeroon irra hin dabarre ta’uu addunyaa guddate irraa baradhaa (USA, Rusia, Chaina fi kkf).
Naannoon biraa nagaa qaba, kan nagaan dhibe Oromiyaa keessa dha. Sababaan isaa naannoon biraa hidhatnoo hiikkachiisuuf tattaaffii hin godhamne. Kan hidhatnoo hiikkachiisuuf dhaadatee lola labsee, loltuu bobbaase Lammaa Magarsaa dha. Namni lola labse waa’ee nagaa haasa’uu qaruuxee dha jedhamuu danda’a? Namni fedhii uummata guddeessaa dhaggeeffachuu dide, akkamiin dhimma misoomaa uummataaf quuqamuu danda’a? Namni lola uummata irratti labsee uummata irratti roorrisu fi doorsisu haamlee kamiin dhimma nagaa lallabuu danda’a? Akkamiin naannoolee lola hin labsine waliin of-madaalchisa?
Sababaan wal-dhibdee Oromiyaa keessa tokko murtii Lammaa Magarsaa dantaa siyaasaa EPRDF fi ofii isaa guuttachuuf fudhachaa jiru dha. Kan akka diinni qarriffaa qaratee nu nyaatu nu qopheessaa jirus murtii inni fudhachaa jiru dha. Oromoon duubbee namoota isa hogganaa jiranii bareechee beeka. Callisuun wallaaluu miti, tokkummaa Oromoof jennee callisnaan akka tuffii fi wallaalummaatti yoo ilaalame karaa dogoggoraa dha. Kanaaf obbo Lammaa Magarsaa wal-qajeelchuu yoo kan fudhattu taate, aangoo qabdu dhimma bahuun dhimmoota armaan gadii raawwachuuf tattafadhu:
Duula WBO/ABO fi uummata Oromoo irratti labsite hatattamaan dhaabi! Waraanaa fi karoora lola uummata Oromoo fi WBO irratti bobbaaste fi baaste of duuba dachaasi.
Lola uummata Oromoo karaa kaabaa Raayyaa fi Walloo, karaa Kibbaa Gujii fi Borana, karaa Dhiyaa Beegii, Gidaamii, Horro Guduruu, Qeellam Wallaggaa, Beenshangul, karaa baha Cinaqsan, Babbillee, Dirree Dhawaa irratti gaggeeffamaa jiru irratti ofii ajajaa yoo ta’e hatattamaan furmaata itti kenni, du’a fi buqqaafamuu uummata Oromoo irraa dhaabi, yoo irratti aangoo hin qabaatne ammoo Oromoon akka of-irraa ittisu dura dhaabbachuu dhiisi!
WBO/ABO bakkaa fi kabajaa isaaf male argachuu qaba! Namoota wal-dhibdee WBO/ABO waliin qaban kan akka Kamaal Galchuu fi Abbabaa Garasu dhimma nageenya Oromiyaa irratti muuduun dogoggoraa fi kan nagaa Oromiyaa booressu ta’uu hubatuun hatattamaan muudama kana irraa kaasi!
Dhimma WBO fi uummata Oromoo hiikkachiisuu fi hidhachiisuu ilaalchisee murteen isaa uummata Oromoon akka murtaa’uu walii gali! WBO fi hidhatnoon isaa qabeenya uummata Oromooti! Oromoon yoo barbaade WBO jabeessee hidhachiisee sadarkaa ittisa biyyaatti guddifatee ijaarratu, yoo hin feene ammoo qabeenya WBO fi uummata Oromoo qindeeffamee qaama Oromoo ittisuu danda’u akka hundeeffamu dura dhaabbachuu fi yaada hiikkachiisuu jedhu lakkisi!
Humni ittisa biyyaa kan daangaa fi uummata isaa tiksuu dhiibbaa OPDO/TPLF alatti akka yayyabamu dandeenyaan irratti hojjedhu, yoo dadhabde ammoo yaada kana dura hin dhaabbatiin!
Yoo dhimmoota armaan olii raawwate, misoomi Oromiyaa keessaa shaffisaan gaggeeffama. Kan misooma Oromiyaatti danqaa fi danqaraa ta’aa jiru murtii dogoggoraa Lammaa fi Waa’illan isaa TPLF/EPRDF keessa jiran fudhattan dha.
Akkuma ’qacceen ofii reebee ofii iyya’ jedhan, akeeki kees murtii dogoogora ofii fudhatteen uummati nagaa fi loltuun atummaan bobbaaste dhumachaa jiru. Badii murtii dogoggora ati fudhatteen dhaqabaa jiru ammoo uummata Oromoo fi WBOtti haqachuuf tattaafachuun of-tuulummaan, dogoggora ofii-irraa barachuuf fedhii dhabuu kee mul’isa. Kana irraa of qajeelchuun egeree nagaa Oromiyaaf gargaara.
GABAASA OROMIYAA: DHIMMA MAANGUDDOOWWAN JAARSUMMAAFI ERGAMANII; WBO/ABO FI OPDO, November 1, 2018~Naqamte, Gimbi fi Dambidoolloo!
TAAJJABBII-Kutaa 511ffaa – XAWALWWAALLUMMAAN/SAGAAGALUMMAAN OPDO ITTI FUFEE JIRA; ABO Dadhabsiisuuf ija jaamsuuf shira shiruunis waanuma aggaamamedha: Lammaa Magarsaa maal ta’uuf ol fi gad fiigaa jira?
SAGALEE QEERROO HAGAYYA 14 2019 Dhimma qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fi dhimma buqqaatota ilmaan Oromoo bakka addaa qubsiifamanii […]
Amni (Karaan) Qabsoo Bilisummaa Oromoo tolatti kan irra gulufan miti,wareega hedduu gaafata,Qabsaawoti gidiraa hedduun qabsoo jiraachisanii asiin gahan. […]
Untitled August 12, 2019
Aarsaa Gurguddaa Oromoon Har’a Kaffalaa Jirruuf Gaafatamni Jiraachuu Qaba! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 12,2019 Finfinnee Oromiyaa Yakkaawwan […]
Perofeser Isqeel Gabbisaa naannoo Maqalee deemee Geetaachoo Asaffaa argee ture jedhanii? Pro Isqeel maal jedha??
Qophii Bashannannaa Cufinsa Kora ABO Amerikaa Kaabaa kan bara 2019. August 09/2019 Minneapolis Minnesota
Qeerroon OPDO tti Qabsoos ta’e imaanaa laadhate hinqabu! Qalbeessaa Dhangi’aa Bitootessa 7,2019 Fuula miidiyaa irraan kan dhagaa’amuuf kan […]
“GODINA_WALLAGGAA_LIXAA_ONA_SAYYOO_NOOLEE MAGAALAA DABBASOO TARREE MAQAA HIDHAMTOOTAA FI DARARAA ISAAN IRRA GA’AA JIRU. #HAGAYYA_09_2019 #Komaand_Poostiin Aanaa Saayyoo Noolee Namoota Nagaa #Mana_Hidhaa Aanaa […]
Walgayii Hawaasaa kora Gamtaa ABO Amerikaa kaabaa kan bara 2019 Minneapolis Minnesota. August 09/2019 Moyi Cultural Fashin Show […]
“Shiftaan hidhame, miidhame jechuun hiika hinqabu…kan karaa biraan dhufuuf Qawweedhaan deebii laanna” Yaadni jedhu Muummicha Ministeeraa Xoophiyaa Dr. Abiyyi biraa dhagaa’amaa jira. August 8, 2019
Qalbeessaa Dhangayaatiin. Natti dhagaa’ame. Dubartii ulfatu hidhamaa jira. Haadhaaf daa’ima addaan baasanii Harma irraa kutanii haadha mana hidhaa […]
Oromia August 4, 2019